Muhiimadda naqshadeynta garaafyada ee suuq-geynta | Hal-abuurka khadka tooska ah
Muhiimadda naqshadeynta garaafyada ee suuq-geynta
Caalamka suuq-geynta dhexdeeda, naqshadeynta garaafku waxay leedahay muhiimad weyn, tan iyo markii ay tahay sawirka mashruuca, qaybta muuqata iyo bilicda ee soo gasha indhaha. Intaa waxaa dheer, naqshadeynta garaafyada waa qayb ka mid ah suuq-geynta oo kobcaysa oo sii wadi doonta mustaqbalka sababtoo ah waxay ku dhex jirtaa internetka, suuq-geynta dhijitaalka ah iyo farsamada.
Haddii aad raadinayso inaad ku tababarto qaybtan, la suuq geynta fp Waxaad baran kartaa wax kasta oo aad u baahan tahay, marka lagu daro inaad ku tababarato shirkadaha qaybta.
2 Naqshadaynta sawirada ee shirkadaha
3 Xirfadaha naqshadeeyaha garaafyada
Waa maxay naqshadeynta garaafka?
Si aad u bilawdo, waxaa muhiim ah in la ogaado waxa uu yahay naqshadeynta garaafyada iyo meesha ay ka timid. Sida laga soo xigtay AIGA (Machadka Maraykanka ee Nakhshadeynta Naqshadeynta), waxaa lagu qeexi karaa sida "farshaxanka iyo ku-dhaqanka qorsheynta iyo ra'yiga fikradaha iyo waayo-aragnimada leh muuqaal iyo qoraal". Naqshadaynta garaafku waa wax kasta oo gudbiya fariin muuqaal ah, iyada oo loo marayo qoraal, sawir, midab iyo walxo.
Naqshadeynta garaafka soo ifbaxday dhamaadki qarnigii XNUMX-aad ee Yurub sababtoo ah isbeddellada qoto dheer ee u muuqda kacaankii warshadaha awgeed. Magaalooyinku waxay bilaabaan inay koraan oo ay horumariyaan isgaarsiin wanaagsan, gaadiid wanaagsan iyo horumarin dheeraad ah oo dhanka tignoolajiyada ah. Halkaa, Yurub waxay raadisaa qaab u gaar ah oo u taagan waqtiyada cusub waana sida casriga u dhashay. Ka dib waxaa yimid Iskuulka Bauhaus ee Jarmalka iyo Art Deco ee Faransiiska. Xataa dagaalladii koowaad iyo labaad ee adduunka, naqshadaynta garaafyada ayaa aad muhiim ugu ah Galbeedka.
Maanta naqshadeynta garaafyada ayaa u xuubsiibtay da'da dhijitaalka ah. Isbeddelka warqadda ee shaashadda waxay ka dhigan tahay in naqshadeynta garaafyada loo gudbin karo si waxtar leh. Waxa kale oo ay sababtay isbeddel ku yimi habka aanu ku wada xidhiidhno qoraalka ama sawirada nakhshadda dhexdeeda.
Naqshad sawireed ma ahan mid qurux badan. Waxay kor u qaadaysaa aqoonsiga, waxay siisaa shakhsiyad, abuurtaa hal-abuurnimo, waxay keentaa kala duwanaansho xagga tartanka ah ama waxay ka tarjumaysaa qiyamka badeecada ama astaanta.
Naqshadaynta sawirada ee shirkadaha
Shirkaduhu waxay si isa soo taraysa u raadinayaan naqshadeeyayaasha garaafyada, ama si ay bogaggooda shabakadu uga dhigaan mid fudud oo soo jiidasho leh macaamiisha, si ay shabakadahooda bulshada uga dhigaan kuwo xirfad leh ama si ay xidhiidhkooda uga dhigaan mid waxtar leh.
Haddii ay jirto naqshad wanaagsan oo la shaqeeyay, shirkaddu waxay yeelan kartaa faa'iidooyin dhowr ah, sida:
Iibka oo kordhay. Naqshad si cad u muujinaysa qiyamka ay shirkadu rabto inay gudbiso, macaamilka la xidhiidha qiyamkaagu wuxuu aadi doonaa alaabtan halkii uu ka dooran lahaa tartan aan waxba soo gudbin.
Meeleynta. Astaan ​​kasta oo guulaysata waxay leedahay cod ama shakhsiyad u gaar ah. Magacyada caanka ah ee adduunka ugu caansan waxaa lagu aqoonsan karaa waxyaabo kale oo badan oo aan ka ahayn magacooda. Tusaale ahaan, Coca-Cola waxay si dhab ah u hagaajisay midabka cas, ama Adidas si degdeg ah ayaa loo aqoonsan karaa haddii aad aragto saddex xariijimo ah.
Cadaadiska. Qancintu waa ujeeddada ugu weyn ee suuqgeyntu. Waa wax si joogto ah loo raadsado oo naqshadeynta garaafyada ayaa ah aalad weyn oo lagu qanciyo.
Kalsooni. Astaan ​​leh isgaarsiin heer sare ah iyo nashqad si cad loo aqoonsan karo waxay ku sii jiri doontaa indhaha macaamiisha. Haddii ay xusuustaan ​​astaantaada, ugu dambeyntii waxay dhisi doonaan kalsooni maadaama ay yaqaaniin iyaga.
Si loo soo saaro naqshad lagu aqoonsan karo summada, waxaa muhiim ah in uu jiro buug-aqoonsiga shirkadda. buug-gacmeedka aqoonsiga shirkadaha Waa dukumeenti ganacsi kaas oo aqoonsiga muuqaalka ee astaanta ay ka muuqato. Aqoonsiga muuqaalku wuxuu noqon karaa midabada sifaha, astaanta, qoraalka la isticmaalay, halabuurka ama xannibaadaha naqshadeynta. Haddii buug-gacmeedkan aan la raacin, dhamaadka naqshadeynta laguma xiriirin doono qaabka astaanta.
Xirfadaha naqshadeeyaha garaafyada
Sida for Xirfadaha naqshadeeyaha garaafyada waa inuu leeyahay, waxaa jira dhowr waxyaalood oo lagama maarmaan ah si aad u noqoto naqshadeeye wanaagsan iyo xirfadle dhab ah: hal-abuurnimo, dhegeysi firfircoon, xirfadaha tignoolajiyada iyo wax-soo-saarka.
La hal-abuurka Waa karti kala duwan. Qofka hal-abuurka leh wuxuu abuuri karaa naqshado gaar ah oo qiimo leh. Hal-abuurku wuxuu noqon karaa mid la dhalan karo laakiin sidoo kale waa la baran karaa. Had iyo jeer waxaad ku kicin kartaa hal-abuurka jimicsiyada, fiiri isbeddellada cusub oo raadi fikrado cusub.
La dhageysi firfircoon Waxay ku lug leedahay dareenka, fahamka macaamiisha iyo fahamka fariinta ay rabaan inay gudbiyaan. The aqoonta farsamada Dhammaantood waa aaladaha iyo barnaamijyada u heellan naqshadaynta garaafyada waana lama huraan in la barto. Ugu dambeyntii, the isku xirnaan Naqshadeeye waa muhiim in la ogaado sida loola qabsado xaalad kasta.
Sidaa darteed, waxaad horeyba u aragtay in naqshadeynta garaafyada ay muhiim u tahay suuqgeynta. Waa qaybta muuqata, waxay gudbisaa dareeno badan, waxay hagaajinaysaa sawirka shirkadda, si buuxda ayaa loogu beddelay da'da dhijitaalka ah, shirkaduhu waxay u baahan yihiin waxayna noqon doonaan qayb mustaqbalka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Muhiimadda naqshadeynta garaafyada ee suuq-geynta